Jet- mpilalao tsipy kanetibe: « Ny kolontsaina miray hina sy tsy mora kivy no fahobiazana » | NewsMada
Jet- mpilalao tsipy kanetibe: « Ny kolontsaina miray hina sy tsy mora kivy no fahobiazana »
Efa indroa tompondakan’i Madagasikara sahady teo amin’ny taranja tsipy kanetibe “junior” lalaovin’olon-droa miaraka i Jet, mpilalaon’ny CBT. Manana izay heveriny fa antony nahombiazany izy…
Randrianarivelo François Jet, fantatry ny maro eo amin’ny tontolon’ny tsipy kanetibe amin’ny hoe Jet. Mpilalaon’ny Club Bouliste d’Antananarivo na ny CBT. Tanora manana ny ho avy mamiratra eo amin’ny tontolon’ny tsipy kanetibe ny tovolahy, satria vao 19 taona monja izy, ankehitriny, efa indroa tompondakan’i Madagasikara teo amin’ny lalaon’olon-droa miaraka « junior ». Ny taona 2016 sy ny taona 2017 ary koa efa tompondaka lefitra teo amin’izany fiadiana ny amboara izany.
« Afaka miaraka tsara ny fanatanjahantena sy ny fianarana, ary mahazo tombony aza ny mpianatra sady manao fanatanjahantena raha mitaha amin’ny hafa. Manana tanjaka ara-tsaina kokoa ny olona milona ao anaty fanatanjahantena raha manoloana zavatra sarotra na miatrika olana, ary tsy mora kivy satria manana tanjona hotratrarina mandrakariva » hoy i Jet nanazava ny fomba fijeriny.
Manana tanjona handeha lavitra eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ny tovolahy, ankehitriny, indrindra ny handrombaka ny amboara eran-tany toy ireo zokiny misehatra amin’ity taranja tsipy kanetibe ity. « Ny fananana kolontsaina miray hina sy tsy mora kivy no mitondra mankany amin’ny fahobiazana amin’ny zavatra atao, indrindra ny fanatanjahantena” hoy i Jet.
Ilaina ny fianarana na dia eo aza ny talenta sy ny fahaizana fanatanjahantena. Matetika sakana ho amin’ny fivelarana sy tsy hahavitana mandeha lavitra kokoa ny tsy fahampian’ny fandrantoana fianarana any an-tsekoly. Tahaka izany koa ny voka-dratsin’ny tsyfifehezana ny teny vahiny. Araka ny nambaran’i Jet, “mikorontana…Mba tsy hilazana hoe simba ny taranja tsipy kanetibe noho ny savorovoro sy tsy fifanarahana eo amin’ny mpitantana, ary mizaka ny vokatr’izany ny mpilalao amin’ny ankapobeny, amin’izao fotoana”